War Deg-deg ah: Diyaarad Xamuul ah oo ku dhacday deegaanka Carbiska – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Duuliyihii iyo shaqaalihii saarnaa diyaarada ayaa ka badbaaday kadib markii diyaarada ay ku dejiyeen waddo jaay ah iyadoo markii dambana fariisatay. Illaa lix ruux oo lagu sheegay dhalashadooda Masaari kana shaqeynayay diyaarada ayaa laga soo dejiyey iyagoo bed qaba.
Ciidamo isugu jira Soomaali iyo AMISOM oo gaaray goobta ay ku dhacday diyaarada ayaa ilaalinayay agaba saaran diyaarada iyadoo aan la ogeyn waxa ay yihiin.
Dad ku sugan deegaanka Carbiska oo aan la xiriirinay ayaa sheegay in diyaarada ay ku dhacday meel aan ka fogeyn saldhig ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin deegaanka Carbiska.
Gantaalo ku dhacay dhismaha safaarada Ruushka ee caasimada Siiriya